E-KEY token, Security U-key, Security USB-KEY, Electronic Key, eKey, support DES, 3DES algorithms
ဆက်သွယ်ပါ Chip ကဒ်
RFID Card ကို
ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ်
HF Chip ကဒ်
EM ကဒ် / LF Card ကို
အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို
HID Card ကို
JAVA ကဒ် / CPU ကိုကတ်
dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို
ပရင့်ထုတ်ရန်အ Card ကို
Carfts Card ကို
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို
RFID ဆကျကပျ Tag ကို
အဝတ်အစား Tag ကို
ရေချိုးခန်း Tag ကို
anti-သတ္တု Tag ကို
PCB Anti-သတ္တု Tag ကို
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ Tag ကို / ဘိလပ်မြေ Tag ကို
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို
အခြားအ Dedicated Tag ကို
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန်
လက်ပတ် / လက်ကောက်
RFID Crystal Epoxy Tag ကို
EAS Store ကိုနှိုးစက်
LF / HF Reader ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို
ဆက်သွယ်ရန်ကဒ် Reader ကို
သံလိုက် Stripe ဟာကတ်စက်ပစ္စည်း
module / အင်တင်နာ
Password ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Copy ကူးစက်
2.45GHz အမြန်နှုန်း Active ကိုထုတ်ကုန်များ
အခြားအ IoT ထုတ်ကုန်များ
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း
 » ဖြေရှင်းနည်းများ
ဖြေရှင်းနည်းများ 3DES algorithms, E-KEY token, eKey, Electronic Key, Security U-key, Security USB-KEY, support DES
eKey, support DES, 3DES algorithms
Interface USB: 1.0/2.0 အပြည့်အဝမြန်နှုန်း
cryptographic algorithm: DES ဟာ / 3DES
Flash Memory: U disk+flash (128/256M က)/ COS chip (8-16K သည်)
စံ: T က = 0
လုံခြုံရေး features တွေကို: support PIN verification, external authentication, internal authentication
Plug times: 20000 ကြိမ် (depending on the reliability of the USB physical structure)
အဆင့်အတန်းကိုညွှန်ပြ: double color LED, instructions power or communication status, user control buzzer
Operating အပူချိန်: -20℃～+60℃
အတိုင်းအတာ: 60(L ကို)x က 18(W က)x က 8(H ကို) မီလီမီတာ
OperatingSystem Support: Windows ကို 98, Me, 2000, XP ကို, 2003, Windows ကို 7. Customizable Unix or Linux
Technical support: Free SDK
HS-T3 Security USB-KEY, it is also called an electronic key or an electronic token, isanew generation of secure mobile devices launched by Shenzhen Seabreeze Smart Card Co., Ltd မှ, It sets functions of memory flash drive and intelligent electronic key in one. Adopted USB1.0/2.0 technology, COS system, meets ISO7816 protocol standards, built-in high-capacity Flash chip that can save the maximum 128M bytes data, large memory capacity, driverless, easy operating, and highly secure device.
HS-T3 intelligence eKey is smart card and USB interface technology in the integration of safety equipment. It with certificate of digital signature, data encryption and storage, and other functions, isavery good client information in modern computer network security products, establishasystem for the safety of the platform to provide fast, safe client solutions.
SeabreezeRFID also offers customization in casing color, company logo, packing, စသည်တို့ကို.
HS-T3 Security USB-KEY Series is wildly used in various field, such as in network security, software lock, digital signature, the client bonus scheme, PKI authentication, online banking, information security, ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, remote access control, encrypted e-commerce, encrypted e-government, e-business and e-transactions, remote electronic voting, စသည်တို့ကို.
E-အစိုးရ, E-bank, E-payment
Log in control, software encription
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး Form ကို ( ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်ရလိမ့်မယ် )
I am interested in your product E-KEY Token
နောက်တစ်ခု: NFC ကိုဖိုရမ် Tag ကို NDEF format နဲ့ပက်ကေ့
လက်ဗွေရာကို LED Lighting စမတ်စောင့်တပ်ဖွဲ့ခရီးစဉ်စနစ်
RFID Barrier-အခမဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာညီလာခံတက်ရောက် Channel ကိုဂိတ်ဖြေရှင်းချက်
အချိန် Recorder များအတွက် Elfin စမတ်တံခါး Controller, အသိဉာဏ်တက်ရောက် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Reader ကို
RFID / IoT / Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး
LF / HF / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF
ကဒ် / Tag ကို / အင်းလေး / တံဆိပ်တပ်ရန်
လက်ပတ် / Keychain
R / W ကိုစက်
OEM / လိမ္မော်ရောင်
RFID ချိတ်ဆက်မှု Card ကို
ဆက်သွယ်ရန် IC Card ကို
RFID Anti-သတ္တု Tag ကို
RFID တိရိစ္ဆာန် ID ကို Tag ကို
NFC ကိုလက်ပတ်, B ကracelet
စာနယ်ဇင်းများ & မီဒီယာ
သတင်း / ဘလော့များ
ဆုပေးပွဲ & reviews
လျ：0086 755 89823301
RFID Card ကို, IC Card ကို, CPU ကိုကတ်, အင်းလေး, RFID တိရိစ္ဆာန် Tag ကို
E-လက်မှတ်, NFC ကိုလက်ပတ်, Keychain, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်
2013 ©မိတ္တူ | SeabreezeRFID, LTD. | မြေပုံအညွှန်း